‘भारत–चीनको द्विपक्षीय मामिलामा हामी पर्दैनौं’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
‘भारत–चीनको द्विपक्षीय मामिलामा हामी पर्दैनौं’
प्रधानमन्त्री भएपछि छिमेकमा सद्भावना भ्रमण हुने गरेको छ । सद्भावना भ्रमण भएकाले राम्रै होला भनेरै जाने तय भएको हो । दोस्रो, ‘पाइपलाइन’ मा धेरै एजेन्डा छन् । छलफल भइरहेका छन् । २/४ वटा विषय अझै टुंगिसकेका छैनन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका अवरोध टुंगिने प्रक्रियामा छन् । १८ वर्षदेखि नटुंगिएको पञ्चेश्वर परियोजनाचाहिं अहिले पनि अघि बढ्ने अवस्था मैले देखेको छैन । पुनर्निर्माण र हुलाकी सडकका विषयमा पनि कुरा हुनेछ । गृह (मन्त्रालय) सम्बन्धी केही विषय छन् जसमा ड्रग (लागूऔषध) नियन्त्रणका विषयमा छलफल हुनेछ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप समान सन्धिको तयारी गरिँदै छ । भारतले उपलब्ध गराउने सहुलियत ऋणका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बुधबार भारत भ्रमणमा निस्कँदै छ । लामो समयपछि सत्तामा फर्केका देउवाको छिमेक भ्रमण निकै संवेदनशील घडीमा हुँदै छ । वर्षासँगै तराईको भूभागमा हुने डुबानको विषयलाई लिएर मुलुकभित्र असन्तुष्टि चर्केको छ । भुटान–चीन सीमामा दोक्लमको विषयलाई लिएर भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरु आमनेसामने भएका छन् । दुवै छिमेकीको ध्यान नेपालले अख्तियार गरेको ‘तटस्थता’ को नीतिप्रति छ । यो अवस्थालाई सरकारले कसरी हेरेको/बुझेको छ ? सत्ता साझेदार माओवादीका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र चन्द्रशेखर अधिकारीले शनिबार बिहान गरेको कुराकानी :
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको टोली बुधबार भारत जाँदै छ । तपाईं पनि त्यसमा हुनुहुन्छ । यतिबेला भारत भ्रमण गर्नुपर्ने कारण के रहेछ ?
भ्रमणका विषयमा दुईटा कुरा छन् । पहिलो, यो सद्भावपूर्ण भ्रमण हो । कैयौं विषय अघि बढाउने प्रतिबद्धता रहनेछ । तर अहिलेसम्म हामी छलफलमै छौं । जानु अघिल्लो दिनसम्ममा टुंगोमा पुग्ने हो । पाइपलाइनमा रहेका सबैजसो विषयमा छलफल हुने र टुंग्याउने प्रक्रियामा हामी जानेछांै । त्यहीअनुरूपको तयारी छ ।
भ्रमणमा नयाँ विषयभन्दा पनि पुरानै एजेन्डाको सेरोफेरोमा छलफल हुने देखिएको हो ?
सद्भावना भ्रमण नै हो । नयाँ विषय खासै छैनन् । पुरानैलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । हाम्रो ध्यान यसमै बढी केन्द्रित छ ।
 दुइटा छिमेकीमध्ये कतैतिर ढल्किने भन्ने कुरै छैन ।
 दोक्लम विवादमा हामी तटस्थ छौं, रहने नै छौं, तलमाथि हुँदैन ।
 भारतीय पक्षले कोसी ब्यारेजको ढोका सुरुमै खोलिदिएको भए क्षति कम हुन्थ्यो ।
 बिमस्टेक सार्कको विकल्प होइन ।
 रेलको कुरामा सैद्धान्तिक मात्र होइन, योजनै पठाएका छौं ।
वर्षासँगै तराई क्षेत्रमा डुबानको समस्या भइरहन्छ । भारतले सिमानामा बनाएका बाँध, सडकलगायत संरचना पनि यसको कारण बन्ने गरेका छन् । भ्रमणको एजेन्डामा यो विषय छ कि छैन ?
डुबानसम्बन्धमा हामीले दीर्घकालीन र अल्पकालीन विषयमा अडेर कुरा गर्ने तयारी गरेका छौं । यो विषय नउठ्ने भन्ने नै हँ‘ुदैन । हामी उठाउनेछौं । पछिल्लो दृष्टान्त नै स्पष्ट छ । साउन २७ को अविरल वर्षापछि डुबान आरम्भ हुनेबित्तिकै भारतीय पक्षले कोसी ब्यारेजको ढोका खोलिदिएको भए क्षति कम हुने थियो । समस्या पनि हुने थिएन । त्यसका लागि मैले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँगै सीधा फोन गर्नुपर्‍यो । भारतीय राजदूत (मन्जिभसिंह पुरी) सँग तीनपटक टेलिफोनमा कुराकानी गरें अनि ढोका खुल्यो । ढोका खुलेपछि हुने क्षति रोकियो । यसको तत्कालीन समाधान भयो । दीर्घकालीन समाधान के भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । तटबन्ध वा सीमा बनेको संरचना के हो, यो विषयमा छलफल हुन्छ । तर के नतिजा आउँछ, त्यो दुईपक्षीय छलफलपछि नै तय हुन्छ । अहिले भन्न सहज छैन । तर हामीले तयारी राम्रो गरिरहेका छौं ।
एउटा बाँधको ढोका खोल्न परराष्ट्रमन्त्री तहमै कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु अस्वाभाविक होइन र ?
यस्ता विषय आफैंले बुझ्नुपर्ने हो । त्यो स्तरमा अनुरोध नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । तर, अनुरोध गरेर बिग्रेकै जस्तो भने लाग्दैन । कतै न कतै अवस्था स्पष्ट त पार्नैपर्ने थियो, पारें अनि ढोका खुल्यो ।
भारत–चीनबीच चर्केको दोक्लम विवादलाई लिएर नेपालले लिएको तटस्थताको नीति दिल्लीले रुचाएको छैन भन्ने विषय बाहिर आएको छ । यसलाई तपाईंंले कसरी लिनुभएको छ ?
मैले पनि त्यो विषय सुन्ने मात्रै हो । यो कुरा भारतले औपचारिक ‘च्यानल’ बाट व्यक्त गरेको मेरो जानकारीमा छैन । त्यो हामीले अवलम्बन गर्ने नीति हो । त्यसमा उनीहरू खुसी हुने या नहुने भन्ने विषय हाम्रो चासो हो जस्तो लाग्दैन । भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले यस विषयमा कुनै कुरा उठाउनुभएको छैन । चीन र भारतले नेपाललाई आफ्ना पक्षमा तान्ने भन्ने कुरा सञ्चार माध्यम र विज्ञहरूले लेखेको लेखमा आइरहेको छ । हामीले लिएको नीति महत्त्वपूर्ण र सन्तुलित छ । यसमै अडेर अघि बढ्ने हो । उनीहरूले यसमा बढी चासो दिएको जस्तो पनि लाग्दैन । प्रसंग नै नउठेको दोक्लमका विषयमा कसरी त्यसलाई चासो दिएको भन्ने ? अनौपचारिक कतै कुरा गरेको भए मलाई जानकारी छैन । औपचारिक तहमा यस विषयमा कतै कुरा भएको छैन । मैले नै हाम्रो धारणा यहाँस्थित राजदूतलाई स्पष्ट पारिदिइसकेको छु । हामीले तटस्थताको नीति पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बाहिर ल्याएका थियौं ।
यो ‘तटस्थता’ कहिलेसम्म कायम रहन्छ ?
हामी तटस्थ छौं, रहने नै छौं । यसमा तलमाथि हँ‘दैन । दुवै छिमेक यसमा ढुक्क हुनुपर्छ । दुवैको विश्वास एक तह माथि लैजाने र सन्तुलित सम्बन्ध राख्नेमा म सचेत छु । (भारत) भ्रमणमा पनि यस विषयमा हामी सचेत नै हुनेछौं ।
‘तटस्थता’ लाई हामीले कसरी बुझ्ने ? जे भए पनि नबोलिरहने हो कि अरू केही हो ?
कसैसँग पनि नलाग्ने र नझुक्ने नै हो । मुुलुकको दीर्घकालीन हित हेरेर नै यस्तो नीति तय गरिएको हो । यसमा हामी चुकेका छैनौं र चुक्दैनौं । उहाँहरूको नीति, दृष्टिकोण कुन तवरको रहन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । कूटनीतिमा हामी कुनै स्थानमा पनि चुक्नु हुन्न । यसमा सचेत नै छौं ।
नेपालमाथि भारत र चीनको एक प्रकारको कूटनीतिक या मनोवैज्ञानिक दबाब त छँदै छ होला, चाहे त्यो दोक्लम प्रकरणमा होस् या अन्य विषयमा । परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा महसुस गर्नुभएको छैन ?
मैले त फरक पो पाएको छु । त्यस्तो अनुभव गर्नै पाएको छैन । कतै दबाब भएजस्तो लाग्दैन । नेपालले लिएको नीति सही छ भन्ने नै पाएको छु । दुवै मुलुकले नेपालले लिएको नीतिलाई खुसीसाथ ग्रहण गरेको पाएको छु । अनौपचारिक रूपमा त्यो सन्देश पाएको हो । औपचारिक रूपमा उनीहरूले केही भनेका छैनन् । अनावश्यकखालको दबाब आएको भनाइबारे म अनभिज्ञ नै छु । त्यो संकेत पनि छैन । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामीले लिएको नीति सही छ । हामी सही ‘ट्रयाक’ मा अघि बढेका छौं । दुवै छिमेकी खुसी नै छन्, रहनुपर्छ । हामीले कुन नीति लिने, त्यो हाम्रो आफ्नो कुरा हो ।
भर्खरै नेपालले आफू अध्यक्ष राष्ट्र रहेका बिमस्टेकको १५ औं मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गर्‍यो । त्यस क्रममा राजनीतिक भेटघाटको विषयले भारतकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमण अलि चर्चामा रह्यो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । केही प्रशासनिक र अधिकांश सहकार्यका विषयमा सबै पक्ष उत्तिकै उत्साहित छन् । खासगरी बिमस्टेकमा दुइटा कुरा उठाएको पाएको छु । तर, त्यो बाहिर उठेजस्तो होइन । पहिलो त, यो दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई जोड्न नै खोलिएको हो । यसमा पनि व्यापारलाई बढी जोड दिइएको छ । सडक सञ्जालदेखि धेरै विषयमा यसमा काम भएको छ । ‘कनेक्टिभिटी’ लाई जोड्ने हिसाबले काम भएको छ । प्रशासनिक रूपमा बिमस्टेकको महासचिवको नयाँ नियुक्ति गर्ने काम र यसको गति बढाउने विषयमा सबै सहमत भएका छन् । यस्ता बैठक हुँदा दुईपक्षीय ‘साइडलाइन’ छलफल हुनु स्वाभाविक हो । त्यो अहिले पनि यहाँ भयो ।
बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा अगाडि बढाइँदै छ भन्ने चर्चाबारे तपाईंंको के भनाइ छ ?
त्यो होइन । बिमस्टेक सार्कको विकल्प नै होइन । यो जसले भन्छ, त्यो सरासर गलत छ । उद्देश्य दुवैको समान जस्तै रहे पनि वास्तविकता फरक छ । सार्कको छुट्टै तरिका छ, यसको छुट्टै । यसलाई सार्कसँग जोडेर हेर्नेभन्दा पनि त्यसको र आसियानको पुलका रूपमा हेर्दा राम्रो हुन्छ । सार्कलाई महत्त्व नदिएको भन्ने नै गलत हो । यो समयमा पनि सार्कका बैठकहरू भइरहेका छन् । आगामी सेप्टेम्बरमा हुने राष्ट्रसंघीय महासभामा पनि सार्कको विदेशमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक बस्ने तयारी छ । त्यहाँ पनि सार्कको आगामी शिखर सम्मेलनलगायत विषयमा छलफल हुन्छ । अध्यक्षका हिसाबले पनि हामीले त्यो बैठकका लागि सचिवालयलाई भनेका छौं । सार्क र बिमस्टेकलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि सहकार्य गर्ने र सदस्य मुलुकहरूबीच सबै पक्षमा निकटता ल्याउँदै सहकार्य गर्ने थलोका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री बिमस्टेकको बैठकमा आउँदा तपाईंसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता नै भएन । यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?
बिमस्टेकका परराष्ट्रमन्त्रीहरू स्वत: बैठकमै बढी केन्द्रित हुने र त्यहाँ नै छलफल धेरै हुने हुनाले बाहिर छुट्टै छलफलको आवश्यकता महसुस भएन भनौं या त्यो आवश्यक ठानिएन । प्रधानमन्त्री भारत जाने विषय पनि रहेको र आफू पनि सँगै जाने हुनाले पनि त्यसमा जोड दिन चाहिनँ मैले पनि । उहाँलाई पनि त्यही लाग्यो होला ।
उहाँ (स्वराज) फर्केलगत्तै चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल आएर तीन रात बिताउनुभयो । वाङको भ्रमणचाहिं कस्तो प्रकारको हो र कस्तो रह्यो ?
उहाँको भ्रमण विकास सहयोगमै बढी केन्द्रित रहेर भएको हो । त्यसमै केन्द्रित भएर दुईपक्षीय छलफल भए । भूकम्पपछि चिनियाँ पक्षबाट गरिने पुनर्निर्माणको शुभारम्भ गर्नेदेखि नेपाल र चीनबीच रहेका धेरै विषयमा बुँदागत छलफल नै भए । दुईपक्षीय सम्झौतामा रहेका र पाइपलाइनमा भएका विषयमा छलफल धेरै भए । प्रतिबद्धता भएकामध्ये तीनवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएबाट पनि भ्रमणको उपलब्धि पुष्टि हुन्छ । उहाँ राजनीतिक व्यक्ति रहेकाले दलगत छलफलहरू पनि भए । माओवादीसँग भएको छलफलमा म पनि सहभागी भएँ । सबै विषयमा कुराकानी हुँदा बढी नेपालको विकास, यहाँको राजनीतिक स्थायित्व र दुईपक्षीय सम्बन्धमा थप गाढापनलगायतमै कुराकानी भयो । शान्ति प्रक्रिया, निर्वाचनमा नेपालले हासिल गरेको सफलता, दलीय सहकार्यलगायत सबै विषयमा छलफल भयो । उहाँ अन्य दलका नेताहरूसँग पनि भेटेर, छलफल गरेर फर्कनुभएको छ । उहाँ मेरो निकट साथीसमेत रहेकाले म आफैं बिदाइ गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पुगें । चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको र सहयोगी भावना देखाएको उहाँको भ्रमणले पनि पुष्टि गरेको छ ।
चीनसँग हामीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) माहस्ताक्षर त गर्‍यौं तर ‘फलोअप’ हरू भएनन्, यसमा हामी अलमलमै रहेजस्तो देखिन्छ । यस्तो किन भएको ?
सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ । निचोड नआएसम्म काम देखिँदैन । भित्र धेरै काम भइरहेका छन् । बाहिर त नतिजा आएपछि पो आउँछ । बीआरआईमा सहमति भएअनुसार काम हुँदै छ । सम्झौता भएको पारवहन सन्धिका विभिन्न ‘प्रोटोकल’ तय गर्ने, त्यसमा सहमति खोज्नेजस्ता काम पनि भइरहेका छन् । परराष्ट्रसचिव र अर्थसचिवको संयोजनमा दुई छुट्टाछुट्टै समिति बनेर काम अघि बढेको छ । सैद्धान्तिक–नीतिगत रूपमा जुन तवरको सम्झौता भएको छ, त्यसको आधार तय गर्ने कार्य दुवै पक्षबाट भइरहेको छ । चीनको विकासबाट लिने लाभ, व्यापार र पारवहनको समन्वयजस्ता विषय यसमा छन् । त्यस्तै, तातोपानी नाका खोल्ने, रसुवागढीलाई थप व्यवस्थित बनाउने, सडक सदाबहार बनाउने कुरा गरेका छौं । अन्य नाका खोल्न चिनियाँ पक्षले नै चासो देखाइसकेको छ । रेललाई जोड्ने विषय पनि कार्यान्वयन तहमा छ । चीनले ल्हासाबाट सिगात्से ल्याइसकेको रेल केही वर्षमा केरुङ ल्याउने भनेको छ । त्यहाँबाट काठमाडौं ल्याउने, त्यसपछि पोखरा हँ‘दै लुम्बिनी पुर्‍याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले सम्भावनाको प्रस्ताव पठाइसकेका छौं । रेलको कुरामा सैद्धान्तिक मात्र होइन, योजना नै पठाएका छौं । त्यसमा ‘नेगेटिभ/पोजेटिभ’ केही पनि उत्तर आएको छैन ।
सबै सुन्दा तत्काल हुनेजस्तो देखिन्छ । तर, हामी कुरा गर्छौं, काम हुन सकेको देखिँदैन नि । काम हुन नदिन केले रोक्ने गरेको होला ?
रोकिएकै त होइन । बिस्तारै काम भइरहेका हुन् । कतिपय काम नै यस्ता छन्, जुन बिस्तारै हुँदै जानेखालका छन् । त्यही हो, अहिले भएको पनि । विभिन्न आन्तरिक संयन्त्रले काम गर्ने र त्यसपछि दुईपक्षीय संयन्त्रले गर्ने हो । हामीले कैयौं सहमति कार्यावन्यन तहमा पुर्‍याउन खोजिरहेका छौं । जसरी भारतसँग धेरै विषय पाइपलाइनमा छन्, त्यसैगरी चीनसँग पनि धेरै विषय पाइपलाइनमा छन् । प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमणबाट फर्केपछि म चीन भ्रमणमा जानेछु । कतिपय विषय त्यो भ्रमणमा टुंगोमा पुर्‍याउनेछु । ऊर्जा सहकार्यको विषय पनि केही सहमति नजिक–नजिक पुगेको छ । ठूला जलविद्युत् परियोजना निर्माण (विद्युत् उत्पादन) र प्रसारण लाइन जोड्ने काम भइरहेको छ ।
रेलका विषयमा भारतसँग पनि केही कुरा भइरहेको हो ?
भारतसँग पूर्व–पश्चिम रेल चलाउने विषयमा पुन: यो भ्रमणमा छलफल हुनेछ । कुनै उच्चस्तरको भ्रमण गराएर रेलवेको काम आरम्भ गर्ने तयारीसम्म सरकारको छ । जस्तो भारतले यसअघि नै लुम्बिनीमा रेल जोड्ने भनिसकेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध थप चलायमान बनाउन रेलमार्ग निकै उपयोगी हुनेछ । अन्य आयोजनासँगै यसमा पनि कुरा भएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री भएर काम गर्दा भारत र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?
राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने विषयले आफंैमा निकै महत्त्व राख्छ । हामी नेपाली हौं र नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो । दुई विशाल उदीयमान शक्तिका बीचमा रहेको नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो । हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निरन्तरता र संवेदनशीलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको हित र भलाइ हेरेर अघि बढ्ने हो, त्यस्तो देखिएन भने हामीले ‘नो’ भन्न सक्नुपर्छ । उनीहरू एकअर्कामा प्रतिस्पर्धी पनि छन् । समस्या पनि होलान् तर त्यो हाम्रो होइन, उनीहरूको आपसी कुरा हो । हामीले लिएको तटस्थताको नीति मैले माथि नै भनें । हामीले त दुवै देशबाट राष्ट्रिय स्वार्थका लागि फाइदा लिने हो । यो आधारमा दुवैसँग सम्बन्ध राम्रो छ । नराम्रो भन्ने नै छैन । कतैतिर ढल्कने विषय नै छैन ।
तर हाम्रो परराष्ट्र नीति त हरेक सरकारका पालामा सम्बन्धित राजनीतिक दलको नीतिअनुसार फरकफरक ढंगले चलेजस्तो लाग्दैन ?
परराष्ट्र नीति नेपाल राज्यको नीति हो । त्यसैले कसैले दलगत भाव राखेको छ भने गलत हो । फरक दल हुँदा कार्यशैलीमा अलिअलि फरक पर्ला तर आधारभूत नीतिका रूपमा फरक पर्लाजस्तो लाग्दैन र पर्न पनि हुँदैन ।
तपाईंले परराष्ट्र कार्ययोजना ल्याउनुभएको छ । त्यो लागू गर्न भ्याउनुहुन्छ ?
त्यो मेरो ‘भिजन पेपर’ हो । यो संस्थागत भएको छ । मन्त्रालयका सबै महाशाखाबाट ‘एक्सन प्लान’ केही दिनमा आउँछ । त्यसपछि चरणबद्ध काम हुन्छ । हाम्रो लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अलिकति माथि उठाउने भन्ने हो । (नेपालका) राजदूत बसेका छन् तर दुई देशबीच अन्तरक्रिया हुन सकेको छैन । समस्या नै थाहा हुन सकेको छैन । सबैलाई द्विपक्षीय स्थायी संयन्त्र बनाउनसमेत निर्देशन दिएका छौं । राजदूतलाई सक्रिय पार्न हामीले जोड गरेका छौं । सुरक्षित ढंगले रोजगारी दिन र त्यसको सम्भावना खोज्ने काम भएको छ । संसारका धेरै देशसँग हामी खुलेर अघि बढ्ने नै हो । खाडीमा नेपालीलाई पर्ने समस्या समाधानको पहल गर्ने नै हो । कामको समस्यालाई समाधानदेखि मृतकको शव ल्याउन हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्ने नै हो । कामदारको बिमालगायत विषय प्रभावकारी बनाइनेछ । दूतावासहरूले यसमा निर्वाह गर्ने भूमिकाको मूल्यांकन पनि हुनेछ ।
मुलुकको कूटनीतिको मूल नीति तय गर्न बनाइएको कार्यदलको कामचाहिं कहाँ पुगेको छ ?
कार्यदलले विभिन्न चार ‘सेक्टर’ मा काम गरिरहेको जानकारी पाएको छु । आर्थिक, राजनीतिक, संरचना र सुरक्षाका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अध्ययन भइरहेको छ । त्यो अन्तिम रूपमै आउँदै छ । अब धेरै समय नलाग्ने जानकारी टोलीबाट आएको छ । छिट्टै अघि बढ्छ । गम्भीर रूपमा काम भएको छ ।
कूटनीति सञ्चालनमा ‘थिंक ट्यांक’ को ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, सरकारले यो पक्षलाई बेवास्ता गरेजस्तो लाग्दैन ?
त्यस्तो होइन । हामीले त्यो महसुस गरेर यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्दै सोचिरहेका छौं । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संरचनागत सुधार र प्रभावकारिताका बारेमा अध्ययन भएको प्रतिवेदन म हेर्दै छु । यसमा काम हुन्छ । अहिले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छ, तर इच्छाशक्तिको अभाव देखेको छु । कसरी अघि बढाउने सोचिरहेको छु । हामीलाई स्वतन्त्र थिंक ट्यांक आवश्यक छ । यसमा देखिने गरी नतिजा आउँछ । यसलाई मन्त्रालयले महत्त्व दिन्छ, दिनुपर्छ । विरोध कसैको भए कुरा गर्नेछु ।
नेपालको कूटनीतिक क्रियाकलाप बढी भारत–चीनमुखी हुँदै गएको र अन्य मित्रराष्ट्रलाई बिर्संदै गएको झैं लाग्दैन ?
छिमेकी भएकाले भारत र चीनसँग हाम्रो बढी अन्तरक्रिया हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यसो भन्दैमा अन्य मुलुकसँग घटेको भने होइन । जापानसँग हाम्रो सम्बन्ध बढ्दो छ । अन्य देशहरूसँग बढाउँदै जाने नै हो । म परराष्ट्रमन्त्री भएपछि यहाँ ४० राजदूत र दिल्लीमा ३७ मुलुकका कूटनीतिज्ञसँग भेटेको छु । सबै सकारात्मक नै पाएको छु ।
विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई चुस्त र सक्रिय बनाउने योजना छैन ?
धेरै दूतावास आफ्नै शैलीमा चलिरहेका छन् । आवश्यक पर्ने स्थानमा दूतावास छैन । नभए पनि हुने स्थानमा रहेको पनि छ । यसमा हामी अध्ययन गर्दै छौं ।
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ ०८:०५
महिला हिंसा र समाधान
भाद्र ४, २०७४ सुशीला कार्की
नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका सन्दर्भमा केही मुख्य तथ्य आज पनि मेरो मस्तिष्कमा ताजा छन् । सूर्यबहादुरविरुद्ध नेपाल सरकार भएको २०६७ सालको ज्यानसम्बन्धी मुद्दा जुन धनकुटाको हो, पीडक पतिले हिंस्रक रूपमा पत्नीको हत्या गरेको देखिन्छ ।
पति दिनभरि रक्सी खाई मात्तिएर हिंड्छ तर पत्नी मेलापात गरेर ल्याएको चामलले सन्तान र आफ्नो पेट पाल्ने गर्छे । त्यसमाथि घरबाहिर काम गर्न जाँदा दिनरात चरित्रमाथि आशंका देखाई पतिले पत्नीलाई हातपात गर्छ । हत्या गर्ने दिनको अघिल्लो रात मजदुरीको चामल र केही रकम बोकी पत्नी हतारहतार घर आउँछे अनि भातभान्सा तयार गरी बालबच्चालाई ख्वाउँछे । पीडक टन्‍न रक्सी खाई आउँछ र पत्नीको चरित्रमाथि टीकाटिप्पणी गर्न थाल्छ । पत्नीले त्यस राति उसलाई धकेलिदिन्छे । भोलिपल्ट बिहान, पत्नी हतारहतार बालबच्चा र पतिका निम्ति भातभान्सा तयार गरी घरबाहिर निस्कन्छे । ऊ मेलापात गर्ने थलोतर्फ जान लाग्दा पतिले पछ्याउँदै पछाडिबाट आग्लाले प्रहार गर्छ । पटकपटकको प्रहारपछि उसको मृत्यु हुन्छ । हत्याको कारण थियो, पुरुषको पुरुषत्व र अहम् ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाविरुद्ध दिवस माइन्छ । प्रत्येक वर्ष हिंसाविरुद्ध सोह्रदिने अभियान चल्छ । हामीले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ लाई अनुमोदन गरी स्वीकार गरेका छौं । थोरै भए पनि हामीकहाँ हिंसाविरुद्धका कानुन छन् । प्रहरीमा छुट्टै महिला सेल खडा गरिएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाबाट अन्तक्र्रिया चलाइएका छन् । यसै वर्ष प्रभावकारी महिला सभासदले बढ्दो महिला हत्याहिंसाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाए । यस्तो प्रयास निरन्तर भइरहेको पनि छ । सरकारले महिलाको विकासका निम्ति ठूलो रकम छुट्याएको छ । तापनि महिलाविरुद्ध हुने हिंसामा न्यूनीकरण नभएर वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ । यति मात्र नभई हिंसाको रूप परिवर्तन भई नयाँ प्रकृतिमा हिंस्रक घटना देखिन थालेका छन् ।
घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, महिलाको हत्या, बालविवाह, बहुविवाह, इच्छाविरुद्धको विवाह, जातीय भेदभावबाट हुने उत्पीडन, चलीबेटी बेचबिखनजस्ता अपराध गाउँ, नगर आदिबाट पनि मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गरिन्छ । थोरै संख्यामा मात्र यस्ता विवाद अदालतमा प्रवेश पाउन सफल हुन्छन् । तीमध्ये पनि अधिकांश फितलो अनुसन्धानका कारण ठहर हुन सक्तैनन्, तथापि महिलाविरुद्ध हुने हत्याका वारदातको तथ्य पढ्‍दा मुटु काँप्ने तथ्य फेला पर्छन् । मौकामा भातभान्सा तयार नगरेको, मीठो नपकाएको, खानेकुराको जोहो गर्न नसकेको, यौनतृष्णा नमेटाएको, परपुरुषसँगको अवैध सम्बन्धको आशंका, पैसाका निम्ति आफन्त चेलीबेटीको बेचबिखन र वेश्यावृत्तिमा आफन्तले नै धकेल्नु, परस्त्रीसँगको नाजायज सम्बन्धका कारण पत्नीलाई यातना दिने वा षड्यन्त्रमूलक हत्या, वैदेशिक रोजगारमा महिलाले पाउने हिंस्रक तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारजस्ता प्रकृतिका मुद्दा न्यायालयमा दर्ता हुन आउँछन् ।
बलात्कारका नब्‍बे प्रतिशत मुद्दामा पीडित महिला, बालबालिका तथा युवतीले प्रथम अवस्थामा वारदातको दाबी गरे पनि पछि न्यायालयमा बलियो हुन भने सक्दैन । हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान देशमा महिलाको हैसियत गौण हुन जान्छ । आमा, बाबु, इष्टमित्र, छरछिमेकी र स्वयम् पीडकको दबाब, प्रभाव र पैसाको प्रलोभनमा पीडितको हार हुन जान्छ । अर्कोतर्फ सामाजिक दागका कारण पीडितहरू आफूमाथि परेको अन्यायबारे मुख खोल्न सक्दैनन् । हुन त केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा पीडितको इन्कारी अस्वीर गर्दै वारदातको परिस्थिति, चिकित्सकको जाँच प्रतिवेदनका आधारमा अपराधलाई ठहर गरेको पनि छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा हाम्रो समाजमा धेरै हुने गरेका छन् । पुरुषमाथि पनि हिंसा भएका समाचार यदाकदा सुन्‍न पाइन्छ । यसको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि ज्यादाजस्तो पीडक महिलालाई पीडित पुरुषले प्रताडित गरेको जरियाबाट धेरैजसो घटना घटेको देखिन्छ । यस्तो वारदातलाई प्रदाडित मानसिकता भनिन्छ । यससम्बन्धी कानुन हामीकहाँ छैन तर मुलुकी ऐनको अ.बं. १८८ का आधारमा व्याख्या गरी सजाय गर्ने गरिन्छ । महिला हिंसाविरुद्ध हामीकहाँ केही कानुन भए पनि ती प्रभावकारी छैनन् । यिनको प्रयोगमा प्रहरी प्रशासनले चासो देखिन्‍न ।
हिंसाको कारक वैदेशिक रोजगार
अहिले जल्दोबल्दो समस्या भनेको वेदैशिक रोगजारमा जाने महिलाविरुद्ध हुने हिंसा पनि हो । यसले रेमिट्यान्स त भित्र्याउँछ साथसाथै विकृति पनि प्रशस्त भित्र्याएको छ । वेदैशिक रोजगारका नाउँमा हाम्रा चेलीबेटी अरब मुलुकमा बिक्री भएका छन् र कतिपयको अत्तोपत्तो छैन । कतिले आफ्नो इज्जत बेच्नु परिरहेको छ । फर्कंदा रित्तो हात ज्यान बचाएर भाग्नुपर्ने, मानसिक र शारीरिक शोषणका कारण आत्महत्या गर्न विवश हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । द्वन्द्वरत मुलुकहरूमा झुक्याएर पुर्‍याउने अनि अवैध सन्तानसहित फर्कनुपर्ने अवस्था कतिपयको छ । अवैध गर्भधारणका कारण आएका चेलीले सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउने क्रममा भ्रूण हत्या गर्दा आफ्नै ज्यान जोखिममा परेका घटना पनि छन् । यी सबै विकृतिका कारण सिंगो राष्ट्र आहत हुन पुगेको छ ।
पढेलेखेका महिला जो स्नातकसम्मै छन्, मुलुकमा रोजगारी अभावमा आफ्रिकाको गर्मी भूभागमा डान्सबारमा नांगै नाच्न पुगेका छन् । नेपाली मानव तस्करहरू छाती ठोकेर चेलीबेटीलाई रोजगारी दिलाएका छौं भन्छन् । सरकार मौनता साधरे बसेको देखिन्छ । धेरै पैसा भएका यिनै मानव तस्करहरूकै हालीमुहाली र पहुँच सरकारमा छ भन्‍ने धेरैको कथन छ । वैदेशिक रोजागर पेसा वस्तुत: दलालका निम्ति लाभप्रद छ, रोजगर गर्नेहरू र राष्ट्रका निम्ति छैन । एकातर्फ दलालले देखाएको आकर्षणमा प्रभावित भएर जाने युवकहरू मृत्युको ट्‍याग भिरेर फर्केको देखिन्छ । अर्कोतर्फ यसले हाम्रो समाजमा जताजतै भाँडभैलो सिर्जना गरेको पाइन्छ । हाम्रो आदर्श, नैतिकता, चरित्र, परम्परा र मौलिकतामाथि यो पेसाले ठूलो प्रहार गरेको समेत छ । स्वयम् वैदेशिक रोजगारमा जाने पुरुषको परिवार मुलुकभित्र सुरक्षित छैन । शोषण, जाली, फटाहाको फेरमा पर्नाले हत्याहिंसा, लुटपाट, अपहरण र महिला हिंसा वृद्धि भएको छ । यसले परिवारहरू विखण्डन गरिदिएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण र रोकथाम राज्य शक्तिको इच्छामा निर्भर हुन्छ । मुलुकभित्रबाट नभई भारत, श्रीलंकामार्फत वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा मानव तस्करी गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् तर सरकार यसको नियन्त्रणतर्फ उदासीन छ । प्रहरी, प्रशासन र सरकारले सक्रियतासाथ कारबाही गरेको देखिँदैन । मानव तस्कर पहिचान गरी कानुनको कठघरामा उभ्याई कडा सजाय दिए मात्र केही हदसम्म हिंसा नियन्त्रण हुने थियो । दलालहरूको मनोबल बढेको छ र ग्रामीण क्षेत्रको भित्री भूभागमा गई सोझासिधा महिलालाई आयआर्जनको प्रलोभन देखाई तिनैबाट र पुन: बिक्री गरेर दोहोरो आर्जन गर्छन् । कल्याणकारी राज्यमा नागरिक स्वतन्त्रता र शोषणविरुद्धको हक संरक्षण राज्यले गर्ने गरेको हुन्छ । नपढेका, अशिक्षित, ग्रामीण, राजधानीसम्म नदेखेका, वेदैशिक भाषा नबुझ्ने, कामको मेलोसम्म नपाएकालाई महिलाको स्वतन्त्रताबारे नकारात्मक अवधारणा रहेको अरबजस्तो मुलुकमा रोजगारीमा पठाउनु भनेको समुद्रमा चार हातखुट्टा बाँधेर फाल्नुसरह हो ।
सरकार वैदेशिक रोजगारका नाममा रेमिट्यान्स प्राप्तितर्फ सचेत छ । महिला जो हिंसाको सिकार भएका छन्, अपांग छन्, अवैध सन्तान पाउन बाध्य छन्, अचेत भएर फर्केका छन्, अंगभंग भएका छन्, आर्थिक रूपबाट शून्यमा पुगेका छन्, तिनको पुन:स्थापनाबारे मानवतासम्म राख्दैन । मुलुकको अहिलेको वातावरण हेर्दा सबैमा पैसा भएपछि पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सबै खरिद गर्न सकिन्छ भन्‍ने अवधारणा विकास भएको देखिन्छ । मानव तस्करहरूले अहिले पैसाका बलमा सबै कुरा पाएका छन् । यो धन्दा एउटा उद्योगका रूपमा खडा छ । जबसम्म यो पेसामा नियन्त्रण र नियमन हुँदैन, महिला हिंसाको शृंखलामा कमी आउनेछैन । यसको नियन्त्रणका निम्ति सरकारले केही अभियान सुरु गर्नुपर्छ । योग्यताअनुसारको रोजगारी, तालिम, गन्तव्य मुलुकको भाषा, सामान्य लेखपढको शिक्षा, जोखिममा परे ज्यान जोगाउने उपाय, सम्बन्धित मुलुकको भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्था आदिबारे ज्ञान दिनु नितान्त आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त हिंसाग्रस्त मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अवैध मार्ग (भारत, श्रीलंका) बाट पनि जान दिनु हँुदैन । मानव तस्कर र दलालका बारेमा यकिन गरी सजाय र क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ । बैदेशिक रोजगारमा गएका आफ्ना नागरिक बसोबास गरेको ठाउँ हिंसाग्रस्त क्षेत्र घोषित भए संरक्षण दिनुपर्छ । महिलाको आम्दानीलाई अरूबाट हुने ठगी/किर्तेबाट जोगाउनुपर्छ ।
हाम्रो समाजमा महिलाविरुद्ध घरेलु हिंसा प्रशस्त हुने गर्छ । यसको उजुरी महिला सेलमा परेको अवस्थामा सामान्यत: पतिपत्नीको झगडालाई परालको आगो भनी नजरअन्दाज गर्ने गरिन्छ । यस्ता विवाद कहिलेकाहीं झाँगिँदै जान्छन् र घातकसिद्ध हुन सक्छन् । सामान्यत: महिला सेलमा विवादलाई मेलमिलापबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ । अन्याय नै परेको हो भने पनि न्याय दिलाउनेतर्फ सेलले प्राय: जाँगर देखाउँदैन । यसरी अपराध गर्नेले उन्मुक्ति पाउने हो भने निश्चय नै अपराधीको मनोबल बढेर जान्छ, यसले आपराधिक प्रवृत्तिमा बढोत्तरी ल्याउँछ । वास्तवमा महिला हिंसामा बाधक वैचारिक विभाजनद्वारा खडा भएका राजनीतिक दलहरूमा अहिले देखिएको प्रवृत्ति पनि एक हो । आस्थाका आधारमा अपराधीको संरक्षण र प्रहरी प्रशासनबाट अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति गराउनुले पनि पीडितहरूलाई अन्याय पर्न गएको हुन्छ ।
नेपालमा जति रफ्तारमा महिलाको शिक्षा, रोजगारी तथा आयआर्जनबाट आत्मनिर्भर भई विकास हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेको छैन । योजना–परियोजनामा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनले प्रशस्त लगानी गरेका छन् तर लगानीबमोजिमको प्रतिफल कम छ । हामी महिला हिंसाविरुद्ध गरिने कार्यक्रमका नाउँमा भोजभतेर, कार्यदल र भ्रमणका कार्यक्रममा सीमित हुने गर्छौं । विपन्‍न, पिछडावर्ग, गरिबीको रेखामुनी रहेका र पीडित महिलाका निम्ति आयआर्जन, पेसा, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ । तिनका निम्ति सहरबजारमा गरिने भाषण, कार्यक्रम र कार्यपत्रको पाठको कुनै औचित्य छैन । कार्यक्रम सञ्चालकलाई मात्र लाभ हुने यस्ता कार्यक्रमको उपादेयता छैन । बरु शिक्षा र चेतनामा वृद्धि हुन जरुरी छ । शिक्षा, प्राविधिक तालिम, सानातिना व्यवसाय, रोजगारी व्यवस्थाका अतिरिक्त हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणतर्फ लगेर रोजगारीको सिर्जना गर्न आवश्यक छ । नेपालमा अधिकांश महिला कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् । त्यसैतर्फ आकर्षित गराउनु र यो पेसालाई सरल र व्यावसायिक बनाउनु जरुरी छ ।
वस्तुत: नेपालमा कृषि क्षेत्र जटिल भएकाले यसतर्फ आकर्षण कम छ । मल, बीउविजनको एकातर्फ अभाव छ भने अर्कोतर्फ खरिद गर्न पाए पनि कमसल भइदिँदा उब्जामा ह्रास आउने गर्छ । कृषि क्षेत्रमा पनि व्यापारीको ठगी छ । दस कर्म गरी कमाए पनि किसानका हातमा उत्पादन रहेसम्म भाउ हँुदैन । यही कारण पनि युवा शक्ति पलायन भएका छन् । अर्कोतर्फ पम्परागत पेसामा वैज्ञानिकीकरण नगरिएकाले उति नाफा छैन । त्यसैले युवा पनि राजनीतितर्फ लागेका छन् । राजनीतिमा व्यक्तिलाई लाभ होला तर जग्गामा उत्पादन नभए त्यसबाट आश्रित हुने र जीविका चलाउनेहरूलाई समस्या हुन जान्छ ।
सामाजिक आन्दोलनको खाँचो
नेपालमा सामाजिक आन्दोलन भएको छैन । सामाजिक आन्दोलनबाट जनचेतना जगाउन सकिन्छ । सामान्य आयस्रोतबाट पनि सरलैसँग बाँच्न सकिने (सादा जीवन उच्च विचार) अवधारणा कसैमा छैन । बढ्दो भौतिक सुखसुविधा उपभोग गर्ने लालसाका कारण आयव्ययमा तालमेल नहुँदा परिवार–परिवारबीच वादविवाद भएर हत्याहिंसाजस्ता आपराधिक गतिविधि निम्तिन्छन् । अवैध स्रोतबाट प्राप्त आय हुनेसँग नहुनेले खर्चमा दाँजिन खोज्दा सामाजिक द्वन्द्व र अपराध बढेका हुन् । सादगीसँग जिउने प्रवृत्ति हराएको छ । पहिले मानिस घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्थे तर अहिले सामाजिक व्यवहारमा लाखौं करोडौं खर्च हुने गरेको छ जसको कुनै अर्थ छैन । तसर्थ समाजमा सरल जीवन जिउन जगाउन अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।
हामीकहाँ पारिवारिक विवाद समाधानका निम्ति सरसल्लाह दिने निकायको पनि अभाव छ । कतिपय हिंस्रक घटनामा परिणत हुने विवादका सन्दर्भमा सामाजिक तौरमा अग्रज र जानकारहरूले सरसल्लाह दिए आपसी सद्‍भाव र मायाप्रेम बढ्न सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हत्याहिंसाका घटना चेतना अभावमा भएका हुन्छन् । सानो रिसइबीका कारण पत्नीको हत्या गरेका प्रशस्त घटना छन् । अहिले पनि पुरुषवर्गले महिला भनेपछि आफू समानको हो भन्‍ने सोच राख्दैनन् । यो पुरातन सोचका कारण पुरुषमा अहंकार भएकाले सानातिना विवादमा पनि सहन नसकी हात छाड्ने र दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले संविधान, कानुनले प्रदत्त गरेको समानता र स्वतन्त्रताका हकका विषयमा पुरुष वर्गमा चेतना जगाई सद्‍भावपूर्ण सामाजिक वातावरण कायम गर्न जरुरी छ ।
माधवकुमार नेपालको अन्तर्वार्ता- ‘चुनावयताका सरकारका एकलौटी निर्णय मान्दैनौं’
डा. युवराज खतिवडाको अन्तर्वार्ता ‘विदेशी लगानीको ढोका छिटो खोल्नुपर्छ’
पूर्वसभामुख नेम्वाङसँग अन्तर्वार्ता– 'राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नासाथ संविधानसम्मत हुन्छ भन्ने छैन'
ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी : ‘पोजिसन बनाएर एकताको कुरा गर्नु हुँदैन’